နိုငျငံသားအားလုံး လှတျမွောကျဖို့ လိုအပျနသေေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ – Kyaw Zaw Oo's Blog
January 4, 2020 January 5, 2020 web_master
နိုငျငံသားအားလုံး လှတျမွောကျဖို့ လိုအပျနသေေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ
နိုင်ငံသားအားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
မြန်မာတွေလွတ်လပ်ပြီး မြန်မာ မဟုတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ စုစည်းအခွင့်အရေး (collective rights) တွေ နှိပ်ကွပ်ဖျက်ဆီး ချိုးနှိမ်ခံရတာ ဒီကနေ့မှာ (၇၂) နှစ် ပြည့်မြောက်ပါတယ်။
ရခိုင်စတဲ့ လူမျိုးအလိုက် ရရှိရမယ့် စုစည်းအခွင့်အရေးတွေအား အကြီးအကျယ် ဖျက်ဆီးမှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ရာ လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေဟာ ဘာကို ဇောင်းပေးပြောတတ်သလဲ ဆိုတော့ ဒီမြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဥပမာ ရုပ်ရှင်မင်းသား နေတိုး လိုမျိုး လူတစ်ဦးချင်းအောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တာပဲ ဆိုတဲ့ ကလေးကလား စကားမျိုးကို ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုစကားမျိုးတွေကို ယနေ့မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သံယောင်လိုက်နေကြတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေဆဲ အနှစ် (၇၀) ကျော် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကြောင့် ဖြစ်ပွားနေရတာ မဟုတ်ဘဲ (မြန်မာ) မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေကို နှိပ်ကွပ်နေသူတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာဖြစ်ကြာင်း အလွန်ရှင်းလင်း ထင်ရှားလှပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ ရှင်သန်နိုင်စေရန်အတွက် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ် စနစ်ကသာလျှင် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တင်ပေးနိုင်မယ် ဆိုတာကို သိနားလည်သူများစွာက ကြိမ်ဖန်များစွာ ထောက်ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖက်ဒရယ်စစ်စစ်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေထဲက တစ်ခုမျှသာဖြစ်တဲ့ ဘဏ္ဍာငွေဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်ပီသမှုဟာ ယနေ့ nld အစိုးရ လက်ထက်အထိ လုံးဝမရှိခဲ့တာ အထင်အရှား ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်တာကလွဲလို့ ဘာသယံဇာတမှ မထွက်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်တစ်ကြောနေ လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေဟာ ဗြိတိသျှတွေ လက်လွှဲပေးခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၂) နှစ်ကစပြီးတော့ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍရဲ့ အကြမ်းဖျင်း (၉၃) ရာခိုင်နှုန်းကို အစဉ်အဆက် နှစ်စဉ် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲပြီးတော့ ကျန်ပြည်နယ်ခုနစ်ခုက တစ်ပြည်နယ်ကို တစ်ရာခိုင်နှုန်းမျှနဲ့ စုစုပေါင်း ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ သုံးစွဲခွင့် ရနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း အကြမ်းဖျင်း တွက်ချက်ကြည့်မှုတွေကတစ်ဆင့် မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာဆိုရင် ဖိနှိပ်လွန်းအားကြီးတဲ့ အတွက် ဖိနှိပ်သူတွေကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည် လွတ်လပ်စွာ ကြီးထွားခွင့်အပါအဝင် အခြားလွတ်လပ်ခွင့်တွေ စတင် ဆုံးရှုံးတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူများကို ကျွန်ပြုသူတွေကိုယ်တိုင် မလွတ်လပ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ ပြယုဂ်တွေ စတင်မြင်ရတာကို ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်က ရှုစားနေကြပါပြီ။
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်ရိုးမှန်ရင် . . . ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပုံဖော်ထားတဲ့အတိုင်း စစ်မှန်သော မေတ္တာရှင်ကြီးတွေ ဂရုဏာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်နေရိုးသာမှန်ရင် . . . ဘာတန်ဖိုးမှ လှမ်းမမြင်ရတဲ့ ဒီ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း တွေ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်သူတွေအား ဆုတံဆိပ်ပေးခြင်းတွေကို ရှောင်ကြည်လျက် တိုင်ပြည်ရဲ့ လိပ်ခဲတည်းလည်း အနေအထားတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ရာ နိုင်ငံရေးအရ ထွက်လမ်းအဖြေရရှိအောင်သာလျှင် အချိန်မနှောင်းမီ အမှန်အကန် ကြိုးစားသင့်ပါကြောင်း အာဏာကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုင်စွဲထားသူများအားလုံးကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ဇွန်နဝါရီလ (၄) ရက်
မွနျမာတှလှေတျလပျပွီး မွနျမာ မဟုတျတဲ့ လူတှရေဲ့ စုစညျးအခှငျ့အရေး (collective rights) တှေ နှိပျကှပျဖကျြဆီး ခြိုးနှိမျခံရတာ ဒီကနမှေ့ာ (၇၂) နှဈ ပွညျ့မွောကျပါတယျ။
ရခိုငျစတဲ့ လူမြိုးအလိုကျ ရရှိရမယျ့ စုစညျးအခှငျ့အရေးတှအေား အကွီးအကယျြ ဖကျြဆီးမှုကို ဖုံးကှယျဖို့အတှကျရာ လူမြိုးကွီးဝါဒီတှဟော ဘာကို ဇောငျးပေးပွောတတျသလဲ ဆိုတော့ ဒီမွနျမာ လူ့အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ဥပမာ ရုပျရှငျမငျးသား နတေိုး လိုမြိုး လူတဈဦးခငျြးအောငျမွငျအောငျ လုပျနိုငျတာပဲ ဆိုတဲ့ ကလေးကလား စကားမြိုးကို ပွောတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုစကားမြိုးတှကေို ယနမွေ့နျမာ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ တှငျတှငျကယျြကယျြ သံယောငျလိုကျနကွေတာကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ လကျရှိ ဖွဈပှားနဆေဲ အနှဈ (၇၀) ကြျော လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ ဟာ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတှကွေောငျ့ ဖွဈပှားနရေတာ မဟုတျဘဲ (မွနျမာ) မဟုတျတဲ့ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးတှကေို နှိပျကှပျနသေူတှကွေောငျ့ ဖွဈရတာဖွဈကွာငျး အလှနျရှငျးလငျး ထငျရှားလှပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံကို တညျငွိမျဖှံ့ဖွိုးသော နိုငျငံတဈခုအနနေဲ့ ရှငျသနျနိုငျစရေနျအတှကျ စဈမှနျသော ဖကျဒရယျ စနဈကသာလြှငျ လမျးကွောငျးမှနျပျေါတငျပေးနိုငျမယျ ဆိုတာကို သိနားလညျသူမြားစှာက ကွိမျဖနျမြားစှာ ထောကျပွခဲ့ကွပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဖကျဒရယျစဈစဈရဲ့ အင်ျဂါရပျတှထေဲက တဈခုမြှသာဖွဈတဲ့ ဘဏ်ဍာငှဆေိုငျရာ ဖကျဒရယျပီသမှုဟာ ယနေ့ nld အစိုးရ လကျထကျအထိ လုံးဝမရှိခဲ့တာ အထငျအရှား ဖွဈပါတယျ။
အာဏာကို လကျဝါးကွီးအုပျနိုငျတာကလှဲလို့ ဘာသယံဇာတမှ မထှကျတဲ့ ဧရာဝတီမွဈတဈကွောနေ လူမြိုးကွီးဝါဒီတှဟော ဗွိတိသြှတှေ လကျလှဲပေးခဲ့တဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး (၇၂) နှဈကစပွီးတော့ တိုငျးပွညျ ဘဏ်ဍရဲ့ အကွမျးဖငျြး (၉၃) ရာခိုငျနှုနျးကို အစဉျအဆကျ နှဈစဉျ ကိုငျတှယျသုံးစှဲပွီးတော့ ကနျြပွညျနယျခုနဈခုက တဈပွညျနယျကို တဈရာခိုငျနှုနျးမြှနဲ့ စုစုပေါငျး ခုနဈရာခိုငျနှုနျးမြှသာ သုံးစှဲခှငျ့ ရနခေဲ့တာဖွဈကွောငျး အကွမျးဖငျြး တှကျခကျြကွညျ့မှုတှကေတဈဆငျ့ မွငျနိုငျပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဒီအခြိနျမှာဆိုရငျ ဖိနှိပျလှနျးအားကွီးတဲ့ အတှကျ ဖိနှိပျသူတှကေိုယျတိုငျ တိုငျးပွညျ လှတျလပျစှာ ကွီးထှားခှငျ့အပါအဝငျ အခွားလှတျလပျခှငျ့တှေ စတငျ ဆုံးရှုံးတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါမှာ ရောကျနကွေပွီဖွဈပါတယျ။ သူမြားကို ကြှနျပွုသူတှကေိုယျတိုငျ မလှတျလပျဘူး ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ ပွယုဂျတှေ စတငျမွငျရတာကို ကမ်ဘာ့ဇာတျခုံပျေါက ရှုစားနကွေပါပွီ။
မွနျမာပွညျကို တကယျခဈြရိုးမှနျရငျ . . . ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပုံဖျောထားတဲ့အတိုငျး စဈမှနျသော မတ်ေတာရှငျကွီးတှေ ဂရုဏာရှငျကွီးတှေ ဖွဈနရေိုးသာမှနျရငျ . . . ဘာတနျဖိုးမှ လှမျးမမွငျရတဲ့ ဒီ လှတျလပျရေးနေ့ အခမျးအနား ကငျြးပခွငျး တှေ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး သတျဖွတျသူတှအေား ဆုတံဆိပျပေးခွငျးတှကေို ရှောငျကွညျလကျြ တိုငျပွညျရဲ့ လိပျခဲတညျးလညျး အနအေထားတှကေနေ လှတျမွောကျဖို့ရာ နိုငျငံရေးအရ ထှကျလမျးအဖွရေရှိအောငျသာလြှငျ အခြိနျမနှောငျးမီ အမှနျအကနျ ကွိုးစားသငျ့ပါကွောငျး အာဏာကို ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ကိုငျစှဲထားသူမြားအားလုံးကို တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
၂၀၂၀ ဇှနျနဝါရီလ (၄) ရကျ
Previous လကျကိုငျတုတျ တဖွဈလဲ ဖိနှိပျရေးသမား အခှငျ့အရေးသမားမြား မဖွဈစလေို
Next ဖြာခငျးပေးရနျ စိတျစောနစေရာမလို